Taliska AMISOM oo la sheegay inay ciidamo kale oo dheeraad ah inay u direeb magaalada Baydhabo – idalenews.com
Taliska AMISOM oo la sheegay inay ciidamo kale oo dheeraad ah inay u direeb magaalada Baydhabo
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya inay halkaasi gaareen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo ay diyaarado ku dajiyeen.
Ciidamada AMISOM ee gaaray magaalada Baydhabo ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo si aad u hubaysan, iyadoo ciidamadu ahaayeen kuwo wata dabaabad aad u xooggan waxayna ciidamadaan ka hortagayaan inay halkaasi dib u qabsadaan Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Gobolkaasi deegaano ka mid ah jooga.
Saraakiisha AMISOM ayaa sheegay iney la wareegi doonaan goobaha ay ka baxaan ciidamada Itoobiya ee ku yaala gobolada Bay iyo Bakool si aysan Al-shabaab ugu gacan gelin, iyadoo maanka lagu hayo wixii ka dhacay magaalada Xudur oo markii ay ka baxeen ciidanka Itoobiya mar kale u gacan gashay Al-shabaab.
Taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolada Bay iyo Bakool Xasan Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sii wajahan yihiin degmada Ufurow ee gobolka Bay halkaasoo todobaadkii hore ay labada dhinac ku dagaalameen.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya degaanka Toora-toorow ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in cabsi xoogan ay ka jirto deegaankaasi kadib markii ay u jiheysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si ay ugala wareegaan ciidamada Al-shabaab oo muddo ka badan 4-sano halkaasi ka arriminayey.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo xiray wadada Taleex iyo guri qaraxyada lagu soo diyaariyo, oo ay la wareegeen